ခွေးနဲ့မျောက်သံယောဇဉ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ခွေးနဲ့မျောက်သံယောဇဉ်
Posted by Thuyazaw on Dec 28, 2011 in Copy/Paste | 13 comments
ဒီသတင်းလေးလဲ ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်………..ဖတ်ပြီးသူများရှိရင်လဲ နားလည်ပေးကြပေါ့
ဘင်္ဂလားဒေ့ ရ်ှနိုင်ငံအရှေ့ မြောက်ပိုင်းမှ မြို့ ကြီးပြကြီးနှင့် ဝေးကွာလှသည့် ကျေးလက်တောရွာတစ်ခုမှ ခွေး တစ်ကောင်ဟာ မျောက်ကလေးတစ်ကောင်အား ကျန်းမာရှင်သန်လာအောင် နို့ တိုက်ကျွေးနေခဲ့ သဖြင့် လူ အများ စိတ်ဝင်စားကာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေပါတော့ တယ်… အဆိုပါမျောက်ငယ်အား (၎င်းတို့ ၏စိုက်ခင်းများအားဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးသည့် မျောက်အုပ်နှင့် အတူပါလာ သည့် အတွက် ) စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေသည့် ရွာသားများထံမှ ကယ်တင်ထားခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
ခွေးမကြီးနို့ မျောက်ကလေးစို့ ….
မိတဆိုးလေးမို့ အကြင်နာပိုခဲ့ လေသလား…
လူပေါင်းများစွာဟာ ဘစ်ရှဝါနတ်ပုရ် ရွာကလေးမှ ခွေးပိုင်ရှင် ရှီပါရီဇာ ရဲ့ နေအိမ်သို့ လာေ၇ာက်ကာ ခွေး သားပေါက်ကလေး ၇ ကောင်ရှိသည့် ခွေးမကြီး မင်းတူ နှင့် မျောက်ကလေးတို့ ၏ ထူးခြားဆန်းကျယ် စွာ သံယောဇဉ်တွယ်ကာ ခွေးသားအုပ်မကြီးအတွင်း နေထိုင်လျှက်ရှိသည်ကို ကြည့် ရှုနေကြပါတယ်… အဆိုပါမျောက်ငယ်အား ၎င်းတို့ ၏စပါးခင်းကို လာရောက်ဖျက်စီးသည့် မျောက်အုပ်ကြီးထံမှ ရွာသားများ ဖမ်းဆီးခဲ့ စဉ်က ရက်ပိုင်းမျှသာ အရွယ်ရှိသေးတာဖြစ်တယ်လို့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဗြိတိသျှ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ ရ်ှနွယ် ဖွား ရီဇာ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်…. ” (အိမ်ရောက်လာပြီး) နောက်နေ့ မှာပဲ မျောက်ငယ်လေးဟာ တစ်ခြားခွေးသားပေါက်ကလေးများနှင့် အတူ မိခင်ခွေးမကြီးထံမှ နို့ ကိုစို့ ပါတော့ တယ်… အဲဒီကတည်းကစပြီး ခွေးမကြီး မင်းတူ ကလည်း သင်းကွဲမျောက်ကလေးကို မိမိရင်သွေးပမာ မွေးမြူခဲ့ တာ ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ခွေးမကြီးနှင့် တစ်ကွ ခွေးသားပေါက်ကလေးများနှင့် အတူ အိပ်စက်လေ့ ရှိပါတယ်…” ဟု ၎င်းက ဆိုပါတယ်…
” တစ်စုံတစ်ယောက်ယောက်ကများ မျောက်ကလေးကို နောက်ပြောင်ခဲ့ ယင်လည်း ခွေးမကြီးမင်းတူ က ဒေါသတစ်ကြီးနဲ့ ဟောင်ပါတယ်… မျောက်ကလေးဟာ ခွေးမကြီးကျောပေါ်ကနေသွားလေရာတစ်ရွာလုံး လိုက်ပါလေ့ ရှိပါတယ်… ကျွန်တော်မျောက်ကလေးကို တွေ့ ခဲ့ တာအခုဆိုယင် တစ်လရှိခဲ့ ပါပြီ…ဒါပေမယ့် တောထဲပြန်သွားမယ့် အ ရိပ်အယောင်၊ လက္ခဏာတောင်မပြပါဘူး…” လို့ လည်း သူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်…
ရွာသူ/ရွာသားများခင်ဗျား သူရဇော်က ခွေးထဲလဲပါ ကြောင်ထဲလဲပါလို့ မထင်ကြပါနဲ့နော်………. ရွာသူ/ရွာသားများအား အစဉ်လေးစားလျှက်
လေးစားပါဒယ် ခွေးမဂျီးလို့ ပြောစေချင်တာလားဟင်….
ဓါတ်ပုံလေးတွေပါ တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရွဲ့ပြီးပြောနေကြတာလားဗျာ၊ ကျနော် တော့ ဘာပုံမှမတွေ့မိပါလား။
ခွေး နို့ စို့တာ မျောက်က ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့။
ခွေးပေါက် လေးတွေကို နွားနို့ တိုက်ရင် ၀မ်းလျော လို့ သေကုန်ရော.. စိတ်တောင် မကောင်းဘူး။
“ကြောင်ပြာသို၊ ခွေးတော်သလင်း၊ လူမသေမချင်း´´ ဆိုတဲ့
ဇဗ္ဗူဒီပါ လက်ယာတောင်ကျွန်း နိမိတ်ထွန်းသည် ဆိုတဲ့အတိုင်း တွက်ကြည့်ရင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ မေတ္တာတွေနဲ့ ပြည့်လျှံလာမယ်လို့ နမိတ်ကောက်ချင်ပါတယ်။
မနက်ကတည်းက အီးမေလ်းထဲ ၀င်နေတဲ့ ဒီပုံတွေကြည့်ပြီး သဘောကျနေတာ … ။
ခွေးမကြီးက အတော်ပိန်တယ်နော် … အံ့သြလို့ လာကြည့်တဲ့လူတွေ … လာကြည့်ရုံတင်မဟုတ်ပဲ …. ခွေးမကြီးကိုပါ အစာကျွေးလျှင်တော့ … အသားနည်းနည်း တက်လာမယ်ထင်ပါရဲ့…
မအိတုံရေ ခွေးမကြီးပိန်တာ ဟုတ်ပါတယ် ဘာကြောင့်ပိန်လဲဆိုရင် ခွေလေးတွေနို့တိုက်ချိန်များတာရယ်၊နို့တိုက်ချိန်များပြီး အစာရှာချိန် နည်းသွားတာကြောင့်ပါ ပြီးတောခွေလေးတွေ အစာစားနိုင်လာရင် ဒိထက်ပိုပိန်ဦးမှာ သူစားမဲ့အစာတွေကို သူမစားပဲ ခလေးတွေကို ကြွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ တိရိစ္ဆာန် ဆိုပေမဲ့ ထားရှိတဲ့ မေတ္တာနဲ့ မိဘတာဝန်ကို သူတို့တွေ ကျေပွန်ကြပါတယ်။
ရွာထဲမှာ တခါ မျောက်တကောင်နဲ့ မိတ်ဆက်ခြင်း ဆိုပြီး ဖတ်ဖူးတယ်။ အဲဒီ မိတ်ဆက်ထားတဲ့ မျောက်က ခွေးမကြီးကို ကပ်ပေါင်းထားတော့ အိုကေ စိုပြေနေတယ်။ ဟိဟိ..
ခွေး နဲ့ မျောက် သံယောဇဉ် တွယ်တာတော့ ထူးခြားတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။
ပခုံး၂ဘက်ကြားမှာခေါင်းပါပြီး လူဖြစ်တာခြင်း တူပါလျက်နဲ့ ငါမှ၊သူမှ၊ ငါ့အမျိုးမှဆိုပြီး လူ လူချင်းခွဲခြားချင်ကြတဲ့သူတွေ ခွေးမကြီးရဲ့ အပြုမူကိုကြည့်ြ့ပီး ရှက်တတ်ရင် သေလို့ရတယ်နော် ၃၁ဘုံမှာ ကျင်လည်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ အဓိက ကြားခံနယ်ဟာ မေတ္တာတရားပဲဆိုတာကို ခွေးမကြီးက ပြလိုက်တာပါ။
တရိစ္ဆာန်ပင်ဖြစ်လင့်ကစား မေတ္တာစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေတာပဲနော်……………